ज्योतिषमा चन्द्रमा (Moon) ग्रहको महत्व र यसको प्रभाव - हाम्रो ज्योतिष
ज्योतिषमा चन्द्रमा (Moon) ग्रहको महत्व र यसको प्रभाव
चन्द्रमा (Moon) को वैदिक मात्र होइन खोगोलीय महत्व पनि छ । सौर्य मण्डलमा चन्द्रमाको स्थान अरु ग्रह भन्दा भिन्न छ। यो लेखमा हामी ज्योतिषमा चन्द्रमाको के महत्व छ? मानव जीवनमा यसको के प्रभाव पर्छ? यसको साथै हामी यसको यन्त्र, मन्त्र तथा रत्न के हो ? यसको बारेमा पनि जान्ने कोसिस गर्नेछौं । आउनुहोस् जानौं चन्द्रमाको बारेमा-
वैदिक ज्योतिषमा चन्द्रमालाई मनको कारक ग्रह मानिन्छ। ज्योतिषीको मत अनुसार चन्द्रमाको प्रभावले नै जातकको मन विचलित वा स्थिर हुन्छ । भनिन्छ कि यदि मन नियन्त्रणमा छ भने सबै कुरा सजिलो हुन्छ, तर यदि मन अस्थिर छ भने काम पुरा हुनमा समस्या त हुन्छ नै साथै काम पनि कुशलतापूर्वक हुँदैन र अन्त्यमा नोक्सान नै हुन्छ। खगोलीय दृष्टिबाट चन्द्रमा (Moon) को महत्व धेरै छ। समुन्द्रमा तुफान आउनेदेखि लिएर ग्रहण लाग्नुमा पनि चन्द्रमाको योगदान रहेको हुन्छ। सूर्य ग्रहपछि आकाशमा सबैभन्दा चमकदार ग्रह चन्द्रमा हो। चन्द्रमाको कक्षीय दूरी पृथ्वीको व्यासको ३० गुना छ त्यसैले आकाशमा सूर्य र चन्द्रमाको आकार सधै समान देखिन्छ।
वैदिक ज्योतिषमा चन्द्र ग्रहको महत्व
वैदिक ज्योतिषमा चन्द्रमा (Moon) नवग्रहको क्रम अनुसार सूर्य ग्रहको पछि दोश्रो ग्रह हो। वैदिक ज्योतिषमा यो ग्रह मन, माता, मानसिक स्थिति, मनोबल, द्रव्य वस्तु, सुख-शान्ति, धन-सम्पत्ति, बायाँ आखाँ, छाती आदिको कारक मानिन्छ । ज्योतिष अनुसार चन्द्रमा राशिहरुमा कर्कट राशिको स्वामी र नक्षत्रहरुमा रोहिणी, हस्त और श्रवण नक्षत्रको स्वामी हो। सबै ग्रहहरुमध्ये चन्द्रमाको गति सबैभन्दा छिटो हुन्छ। चन्द्रमाको गोचरको अवधि सबैभन्दा कम हुन्छ। यो ग्रह लगभग सवा दुई दिनमा एक राशिबाट दोश्रो राशिमा गोचर गर्दछ। वैदिक ज्योतिष शास्त्रमा राशिफल जान्नक लागि व्यक्तिको चन्द्र राशि को गणना गरिन्छ, किनकि यो सबैभन्दा प्रभावी मानिन्छ । चन्द्र राशिको गणना यसरी गरिन्छ कि जातकको जन्म समयमा चन्द्रमा जुन राशिमा स्थित हुन्छ त्यहि जातकको चन्द्र राशि मानिन्छ। ज्योतिषमा चन्द्रमालाई स्त्री ग्रह मानिएको छ।
ज्योतिष अनुसार मनुष्य जीवनमा चन्द्रमाको प्रभाव
शारीरिक बनावटमा चन्द्रमाको प्रभाव हेरिन्छ भने ज्योतिष शास्त्रको अनुसार जुन जातकको कुण्डलीको लग्न भाव वा प्रथम भावमा चन्द्रमा विराजमान हुन्छ, त्यो जातक सुन्दर तथा आकर्षक हुन्छ। यसको साथै ऊ साहसी र धैर्यवान पनि हुन्छ । उसको स्वभाव शान्त हुन्छ। चन्द्र ग्रहको प्रभावको कारण जातक आफ्नो जीवनमा सिद्धान्तलाई अधिक महत्व दिन्छ। सिद्धान्तवादी हुनाले त्यो जातक सामाजिक पनि हुन्छ। जातक थोरै घुमक्कड अर्थात् यात्रा गरिरहने हुन्छ। यसको साथै लग्न भावमा बसेको चन्द्रमा (Moon)ले जातकलाई काल्पनीक रुपमा प्रबल बनाउँछ। यसको साथै जातक संवेदनशील र भावुक पनि हुन्छ।
ज्योतिषमा यदि कुनै जातकको कुण्डलीमा चन्द्रमा बलवान् छ भने जातकलाई यसको सकारात्मक फल प्राप्त हुन्छ। प्रबल चन्द्रमा हुँदा जातक मानसिक रूपबाट सुखी हुन्छ। मनमोस्थिति उसको बलियो हुन्छ। त्यो जातक विचलित हुँदैन। आफ्नो विचार वा फैसलामा जातक संदेह गर्दैन। परिवारतिर हेरिन्छ भने जातकको परिवारमा आफ्नो माता अर्थात् आमासँग राम्रो सम्बन्ध रहन्छ र आमाको स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ।
ज्योतिष शास्त्र अनुसार जुन जातकको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर हुन्छ ती जातकहरुले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्छ। जसमा मानसिक तनावको साथै आत्मबलको कमी पनि रहेको छ। यसका साथै जातकको आमासँग राम्रो सम्बन्ध नरहन सक्छ। वैवाहिक जीवनमा पनि शान्ति रहँदैन। जातक क्रोधी वा आफ्नो वाणीमा नियन्त्रण राख्न नसक्ने हुन्छ। जसको कारण जातकले निराशाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। जातकको स्मरण शक्ति क्षीण हुन सक्छ। माताको लागि कुनै न कुनै प्रकारको समस्या रहन्छ।
चन्द्रमाको पौराणिक महत्व
चन्द्रमाको हिन्दू पौराणिक कथाहरुमा धेरै वर्णन गरिएको छ। कथाहरुमा पनि चन्द्रमालाई मनलाई नियन्त्रित गर्नेवाला तथा जलको देवताको रुपमा बताइएको छ। हिन्दु धर्ममा चन्द्रमालाई देवताको उपाधि प्राप्त छ। तपाईंहरुले भगवान शिवको शिरमा चन्द्रमालाई देख्नुभएको। यसको साथै सोमबारको दिन भगवान् शिवको साथै चन्द्रमा दिन पनि मानिएको छ । हिन्दू धर्म शास्त्रहरुमा भगवान शिव शंकरलाई चन्द्रमाको स्वामी मानिएको छ। सनातन धर्म ग्रन्थ श्रीमद्भगवत महापुराणमा चन्द्र देवलाई महर्षि अत्रि र अनुसूयाको पुत्रको रूपमा उल्लेखित गरिएको छ। पौराणिक शास्त्रहरुमा चन्द्रमालाई बुधको पिता भनिएको छ र र दिशाहरुमा वायव्य दिशा अर्थात् उत्तर-पश्चिम कोणको स्वामी रहेको छ।
यन्त्र – चन्द्र यन्त्र
रत्न – मोती
रङ्ग – सेतो
उपाय – यदि कुनै जातकको कुण्डलीमा चन्द्रमा कमजोर वा कम प्रभावी छ भने त्यस जातकले उपायको लागि भगवान् शंकरको पूजा गर्नुपर्छ। जसले गर्दा जातकलाई चन्द्रमा (Moon) को आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। ज्योतिष शास्त्र अनुसार चन्द्रमाको महादशा दश वर्ष सम्म रहन्छ।